Sidee Noocyada aan Ciyaaraha u Ciyaarin uga Faa'iidaysan Karey La Shaqeynta Saameeyayaasha Ciyaaraha | Martech Zone
Saameeyayaasha ciyaaraha ayaa adkaanaya in la iska indhatiro, xitaa sumadaha aan ciyaarta ahayn. Taasi waxay u muuqan kartaa wax lala yaabo, markaa aan sharaxno sababta.
Warshado badan ayaa ku rafaaday Covid dartii, laakiin cayaaraha fiidiyowga ayaa qarxay. Qiimaheeda ayaa la saadaalinayaa ka badan $ 200 bilyan 2023, koritaanka ku shaqeeya qiyaas ahaan 2.9 bilyan oo ciyaartoy adduunka oo dhan in 2021.
Warbixinta Suuqa Ciyaaraha Caalamka
Kaliya maahan tirooyinka xiisaha u leh sumadaha aan ciyaarta ahayn, laakiin nidaamka deegaanka ee kala duwan ee ku saabsan ciyaarta. Kala duwanaanta waxay abuureysaa fursado aad ugu soo bandhigto astaantaada siyaabo kala duwan una gaarto dhagaystayaasha aad horay ugu dhibtootay inaad la shaqeyso. Ciyaaraha fiidiyowga tooska ah ayaa ka mid ah shaqooyinka riyada carruurta, iyadoo suuqyada tooska ah laga filayo gaadho 920.3 milyan dadka 2024. Kordhinta dhoofintu sidoo kale waa mid muhiim ah; waxaa lafilayaa inay gaarto 577.2 milyan oo qof isla sanadkaas.
Iyadoo ku dhowaad 40% qiimaha warbaahinta ay wadaan shirkado aan ciyaareynin, suuqgeynta ciyaartoyda waa lama huraan. Faa'iidada-wareejinta koowaad waa mid muhiim ah si loo barto loona fahmo suuqgeynta ciyaaraha ka hor tartamayaashaada. Laakiin marka hore, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u fahanto sida ay ciyaartu u eg tahay sanadka 2021.
Dhegeystayaasha Ciyaarta oo La Sharaxay
Waxaad u maleyn kartaa in ciyaarta ay ku gacan sareeyaan wiilasha dhallinta yar ee leh firaaqada aan xadidneyn-laakiin tani run ahaantii kama sii dheeraan karto. 83% haweenka iyo 88% ragga waxaa loo kala saari karaa ciyaartooy. In kasta oo ciyaarta runta ahi ay aad ugu jeceshahay dhallinyarada, haddana 71% 55-64-jirka ah ayaa iyaguna ciyaara. Markay timaaddo goobta, ciyaarta waa caalami. 45% dadka deenishka ah ayaa sheegta inay ciyaaraan ciyaaraha iyo 82% Thais, laakiin dhaqaalaha ugu weyn adduunka ayaa ku habboon yeelasho hawl leh, taas oo muhiim u ah suuqleyda. Xiisaha ciyaaraha iyo doorbidyada sidoo kale way ku kala duwan yihiin heerarka nolosha, qowmiyadda, iyo u jiheynta galmada.
Heerkan kala duwanaanta ee ciyaarta, waa iska cadahay fikradaha dhaqameed ee aan kor u hayn. Laakiin sidee ayey tani uga faa'iideysan kartaa sumaddaada aan ciyaaraha ahayn? Waxay ka dhigan tahay inaad hubto inaad heleyso saamaynta ciyaaraha kuwaas oo kugu habboon adiga.
Qiimaha Saameeyayaasha Ciyaaraha ee Noocyada Ciyaaraha Aan Ciyaarta ahayn
Saameeyayaasha ciyaarta waxay si dabiici ah u fahmaan warshadaha iyo - muhiimad ahaan-dhaqanka ciyaarta. Dhagaystayaashoodu waa taageerayaal u dhinta-adag, si aad ah ugu hawlan isla markaana si isku mid ah u daboolan dhammaan waxyaabaha ciyaaraha. Ciyaartu waa dijitaal; gamers waa firfircoon, macaamiisha warbaahinta casriga ah. Xeeladaha ololaha ee dhaqan ahaan kuu soo shaqeeyay ayaa laga yaabaa inaysan halkan ka shaqeyn, gaar ahaan haddii aadan wax ka beddelin. Waa wada sheekeysi ah Twitch ama YouTubema, TV ama baraha bulshada. Xayeysiinta ciyaaruhu waa inay macno dhaqameed sameysaa ama aad ka takhalusi doontaa dhagaystayaashaada, saamileeyayaashuna waa habka ugu habboon ee lagu hormarin karo astaantaada si kama dambays ah.
Muxuu shuraako ku yahay saamileyaasha ciyaarta ayaa kuu saamaxaya inaad gasho? Dhageystayaal kala duwan oo laga yaabo inaan laga helin meelo kale-gaar ahaan isla miisaanka. Durdurrada 'Twitch durdurrada' badanaa saacado ayay dheereeyaan, iyada oo muuqaalkeeda sheekeysiga tooska ah ay u saamaxayso xiriir joogto ah oo u dhexeeya qulqulka iyo dhagaystayaasha. Ciyaarta YouTube ayaa dhacday 100 bilyan saacadaha saacadaha la daawado sannadka 2020, oo ah tiro ku dhow lama qiyaasi karo. Laakiin maahan wax ku saabsan cabbirka.
Waa run ahaanshaha saamaynta cayaaraha ee la jaanqaadaysa dhagaystayaashooda, abuurista xiriir aad ugu hawlan. Bishii Sebtember 2020, warshadaha ciyaaraha ayaa arkay celceliska celceliska kaqeybgalka ee 9% laga bilaabo saamileyaasha nano (1,000-10,000). Saameeyayaasha Mega (1 milyan ama in ka badan oo raacayaal ah) waxay kujireen heerka labaad ee ugu sareeya 5.24%, iyagoo soo jeedinaya xitaa kuwa caanka ah ee ugu caansan inay awoodaan inay si joogto ah u amraan dareenka dhagaystayaasha. Waxyaabaha ay ku ciyaaraan ciyaaraha waxay dareemayaan inay run yihiin dadka, iyo qalabka asalka ah sida 'Twitch chat' ayaa loogu talagalay in lagu kordhiyo taas.
Sida Noocaagu Ula Shaqeyn Karo Saameeyayaasha Ciyaarta
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loola shaqeeyo saamileyaasha ciyaaraha. Hoos waxaa ku yaal hababka aasaasiga ah ee aan kugula talineyno astaamaha aan ciyaarta ahayn.
Iskudhafyada kafaala qaaday - Xusuus-qorista magacyadu waa xiritaanka wax soo saarkaaga ama adeeggaaga ee ku dhex jira waxyaabaha saamaynta ku leh. Cloutboost wuxuu u ololeeyay Hotspot Shield VPN si kor loogu qaado wacyiga calaamadda iyo wadista soo dejinta alaabada, iyada oo la kafaala qaadayo saamileyaasha Twitch. Kafaalaqaadka 'Twitch' wuxuu ku lug lahaa isgaarsiinta halganka shaqsiyadeed ee sheyga la xaliyay, iyo sidoo kale ka wada hadalka faa'iidooyinka sheyga guud ahaan. Kafaalaqaadka waxaa lagu soo qaatay wax bixin, ka mid noqoshada Hotspot Shield oo ku xardhan calamadaha xayeysiiska iyo astaamaha, iyo adeegsiga wicitaanada joogtada ah ee chatbot ee ficillada.
Tartanka VPN tartan, NordVPN, wuxuu si xoogan diiradda u saarayaa suuq geynta saamaynta-badanaa YouTube-ka. Waxaad ka heli doontaa sumaddooda dhammaan goobaha ciyaarta oo dhan, laga bilaabo saamaynta yar ee ciyaarta ilaa PewDiePie. NordVPN wuxuu xooga saarayaa faa'iidooyinka muddada-dheer ee YouTube; dhagaystayaashu waxay daawan doonaan fiidiyow bilo ama sannado kahor maadaama algorithm-ka barxadda iyo is-dhexgalka adeegsaduhu uusan si gaar ah diiradda u saarin soo-gelinta cusub. Marka la barbardhigo, barnaamijyada sida Twitch iyo Instagram waxay diiradda saarayaan waxyaabaha hadda jira.
LG waxay muujineysaa tusaale kale oo ka mid ah calaamadaha aan ciyaaraha ahayn ee bartilmaameedsada cayaartoyda. Shirkaddu waxay leedahay taariikh la shaqeysiinta ciyaaraha YouTubers, oo muujineysa sida TV-ga LG uu u noqon karo ikhtiyaar weyn cayaaraha. Ciyaaraha Daz ayaa abuuray Fiidiyowga LG-kafaala qaaday kaas oo ku soo bandhigaya sheyga qaab dabiici ah, oo bixinaya tusaale weyn oo ah sida astaamaha aan ciyaaruhu u jiidan karin isdhexgalka dhabta ah ayna u gaari karaan dhagaystayaasha cusub.
Bixinta Waxyeelada - Bixinta had iyo jeer waa hab fiican oo lagu abuuri karo kaqeybgal astaantaada. KFC waxay socodsiisay iskaashi dhanka ciyaaraha ah oo ay la wadaagto Twitch streamers si loo siiyo ixtiraam dhagaystayaasha alaabada alaabada iyo kaararka hadiyadaha markay ku guuleystaan ​​ciyaar. Isticmaalayaasha waxay ku soo galeen iyagoo garaacaya emote KFC ah (Emoticons-gaar ah Twitch) Wadahadalka 'Twitch chat', iyo abaalmarinnada waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan ciyaarta la ciyaarayo. Haysashada sumaddaada alaab loogu talagalay ciyaarta waa hab fiican oo si dabiici ah loogu dhexgalo.
Dhacdooyinka Ciyaaraha - Hershey wuxuu kahelay mid kamid ah dhacdooyinka sanadlaha ee ugu weyn ciyaaraha, TwitchCon 2018, si kor u qaad baararka shukulaatada ee cusub ee 'Reese's Pieces'. Tan iyo markii TwitchCon uu keenay wabiyayaashii ugu waaweynaa ee madal wadaaga hal saqaf hoostiisa, Hershey wuxuu kafaala qaaday Ninja iyo DrLupo wada shaqeyn toos ah. Hawlgalkani wuxuu ka faa'iideystey fursadda gaarka ah ee helitaanka wabiyada wada shaqsi ahaan, iyadoo wadashaqeyntu ku dheehan tahay fikradda ah Ninja iyo DrLupo inay yihiin labo yaab leh-sida Hershey iyo Reese oo kale.
Haddii aad tixgeliso astaantaada inay si fog uga fog tahay ciyaarta, ha uga fogaan wax ka badan MAC Cosmetics-ka wixii ku dhiirrigeliya. MAC wuxuu kafaala qaaday TwitchCon sanadka 2019, Bixinta deeqaha, bixinta adeegyada dalabyada qurxinta, iyo qorista si guul leh durdurrada dumarka sida Pokimane inuu ku ciyaaro ciyaaro qolkooda. MAC SVP Philippe Pinatel wuxuu carabka ku adkeeyay sida Twitch u dhiiri galiyo shaqsiyaadka iyo is muujinta bulshada dhexdeeda, astaamaha qeexaya MAC inay tahay astaan.
Kaalmo - Esports waa aag gaar ah oo ciyaaraha xirfadleyda ah oo noocyadu ka qayb qaadan karaan. Aldi iyo Lidl waxay iskaashi la sameeyeen ururada xirfadleyda dhoofinta si loo kafaalo qaado maaliyadaha loona abuuro nuxur ahaan waxqabadyo wadajir ah. Aldi iyo Kooxda Vitality waxay iskaashi ka sameeyeen sidii kor loogu qaadi lahaa farriinta astaanta aasaasiga ah ee Aldi ee ku saabsan muhiimadda ay leedahay cunno caafimaad qabta, iyagoo ku xiraya raadinta joogtada ah ee Vitality ee waxqabadka.
Kulan iyo Salaan - Sida dhacdooyinka ciyaaraha, la kulanka iyo salaanta waxay bixisaa waddo looga faa'iideysan karo saamileyaasha ciyaaraha ee ka baxsan adduunka dhijitaalka ah. Tusaale ahaan, iska hubi Kullanka Shroud iyo salaanta Zumiez. Isdhexgalka qofka dhexdiisa ah ee abuurayaasha ciyaaraha ugu horreeya waxay abuuraan qiime aad u weyn waxayna isu keenaan bulshooyin heellan.
Warshadaha cayaartu ma ahan koox hoosaad gaar ah oo ay ahaan jirtay. Ciyaartu waa mid caalami ah, waxayna u taagan tahay guuto taageerayaal da 'kasta leh, jinsi, iyo qowmiyado. In kasta oo summadaha ciyaaruhu ay si aan la yaab lahayn ugu dhex milmeen suuqgeynta ciyaaraha, haddana waxaa jirta fursad weyn oo loogu talagalay magacyada aan ciyaaraha ahayn inay ka faa'iidaystaan ​​dhagaystayaal aan hore loo sii shaacin.
Saameeyayaasha ciyaarta waxay metelaan habka taagan si loo helo dhagaystayaasha ciyaaraha. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo helo hal-abuur isla markaana loo abuuri karo wacyiga iyo iibka hareerahaaga. Xusuusnow inaad maskaxda ku hayso in ciyaartooydu yihiin macaamiil casri ah. Waa muhiim ololahaaga saameynta cayaaraha waxaa loogu talagalay warshadaha iyo saamileyda gaarka ah ee aad doorato.
Tags: xikmadciyaaraha dazdarlupoEsportsdumar gaadhosuuqgeynta ciyaartasaamaynta ciyaartasuuq geynta saamaynta ciyaarahaisdhexgalka ciyaarahaitsheysaameynkfclglivestreamciyaaraha tooska ahNinjanordvpnreesesisdhexgalka kafaala qaadaydhifashoqulqulaya durdurradatwitchconyoutubeCiyaaraha YouTubeqaraabo